Ifektri yabakhiqizi - Abakhiqizi baseChina, abahlinzeki
Ubakaki wensimbi engagqwali: JW-01
Incazelo Yomkhiqizo: Ukwenza isidlo sasekuseni esimibalabala, isidlo sasemini esilungiswe kahle noma isidlo sakusihlwa esinothando wedwa, uhlezi uzungeze nomndeni wakho nabangane futhi uxoxa nabo, impilo ipholishiwe ngezigcawu ezinjalo, ezenza abantu bakujabulele. Endaweni efudumele kangaka yasekhishini, usinki osebenzayo futhi obucayi kumele abe yinto ebaluleke kakhulu. Kwakha umoya obushelelezi wasekhishini, omnandi ngempela. Ukuba nosinki osezingeni eliphakeme kuwumuzwa omnandi wenhliziyo yethu, isimo esicwengiweyo nenhle soku ...
Ubakaki wensimbi engagqwali: JW-02
Incazelo Yomkhiqizo: Ukwenza isidlo sasekuseni esimibalabala, isidlo sasemini esilungiswe kahle noma isidlo sakusihlwa esinothando wedwa, uhlezi uzungeze nomndeni wakho nabangane futhi uxoxa nabo, impilo ipholishiwe ngezigcawu ezinjalo, ezenza abantu bakujabulele. Endaweni efudumele kangaka yasekhishini, usinki osebenzayo futhi obucayi kumele abe yinto ebaluleke kakhulu. Kwakha isimo sobuchopho basekhishini, esimnandi ngempela.Ushiya osezingeni eliphakeme uwumuzwa omnandi wenhliziyo yethu, isilawuli esihle futhi esihle ...
Ubakaki wensimbi engagqwali: JW-03
Incazelo Yomkhiqizo: Ukwenza isidlo sasekuseni esimibalabala, isidlo sasemini esilungiswe kahle noma isidlo sakusihlwa esinothando wedwa, uhlezi uzungeze nomndeni wakho nabangane futhi uxoxa nabo, impilo ipholishiwe ngezigcawu ezinjalo, ezenza abantu bakujabulele. Endaweni efudumele kangaka yasekhishini, usinki osebenzayo futhi obucayi kumele abe yinto ebaluleke kakhulu. Kwakha isimo sezulu esisekhishini esibuthakathaka, esimnandi ngempela.Ushiya osezingeni eliphakeme umuzwa omuhle wenhliziyo yethu, isifenqo esikhanyayo nenhle ...
Ubakaki wensimbi engagqwali: JW-04
Isinki yekhishi liyingxenye ebalulekile yekhaya lakho impilo yansuku zonke. Ukucwila kwe-freestanding kwenziwa ngezinto zensimbi ezingenasici (SS201 noma i-SS304) zokuqina kokuqina. ● Ukumuncwa komsindo ngokuphazamiseka okuncane ● Idizayini enkulu yesitsha ukuze kube lula kuwe ● Ukuhlolwa kwekhwalithi eqinile ngaphambi kokulethwa nezindlela eziningana zokupakisha ozikhethele zona. Ukusetshenziswa Komkhiqizo ● Ukugeza i-kitchenware neziqukathi. ● Ngokuwasha nokulungisa ukudla. Amathiphu omkhiqizo ● Ungalahli noma yimaphi amakhemikhali anokhahlo. ● Musa uku ...
Ubakaki wensimbi engenasici: JW-05
Ubakaki wensimbi engagqwali: JW-06
Ubakaki wensimbi engagqwali: JW-07
Ubakaki wensimbi engagqwali: JW-08